ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
မြန်မာ့ရေးရာ သတင်းပဒေသာ (၄-၆-၂၀၁၃ - နံနက်ပိုင်း)
- ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် ငြိမ်းချမ်းရေးခေါ်သံလှုပ်ရှားမှု ရန်ကုန်တွင် ကျင်းပမည် click
- လက်ပံတောင်းတောင်အရေး ဖမ်းဆီးခံရသူ ၂ ဦး တရားရုံးပြောင်း စစ်ဆေး click
- မြန်မာ ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံ ဖြေရှင်းချက် - အပိုင်း (၂) click
- မောက်စံရွာပဋိပက္ခ ပီအန်အို ရှင်းလင်း click
- သိမ်းဆည်းလယ်မြေများပေါ် ထွန်ယက်စိုက်ပျိုးခွင့် ပိတ်ပင် click
- ကျေးလက်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေး (ရုပ်သံ) click
- ဖက်ဒရယ်ယူနီယံ ဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပဖို့ရှိ click
- သမ္မတနဲ့ တွေ့ဆုံရေး ရှမ်းခေါင်းဆောင်တွေ ထိုင်းမှာ ဆွေးနွေး click
- ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် နေပြည်တော် ရောက် click
- ဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့ မြန်မာ့ခရီးစဉ် click
- Medeleine Albright အစိုးရအပြင် နိုင်ငံရေးပါတီခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ တွေ့ဆုံ click
- ဆန်ဖရန်ဘေးဧရိယာ မြန်မာမိသားစုများနဲ့ ၈၈ မျိုးဆက်ခေါင်းဆောင်တို့ တွေ့ဆုံပွဲက အပြန် click
- သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့် အာမခံပေးဖို့ မြန်မာအစိုးရကို တိုက်တွန်း click
- ဘီဘီစီရဲ့ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း သတင်းအစီအစဉ် စတင် click
- အင်တာနက်လွတ်လပ်ခွင့် ဆွေးနွေးပွဲ (ရုပ်သံ) click
- အင်တာနက် တိုးတက်မှုနဲ့ အနှုတ်လက္ခဏာ click
- အာဇာနည်ဗိမာန် ပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ခြင်း (ရုပ်သံ) click
- ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ညီလာခံ ကျင်းပမည် click
- ပညာရေးပေါ်လစီသစ် NLD တင်သွင်းမည် click
- အမျိုးသားပညာရေးမူဝါဒ (ရုပ်သံ) click
- ဦးဝင်းတင်နဲ့နေထိုင်ခြင်း အပိုင်းများ click
- တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရေးမှသည် မွတ်ဆလင်ပြည်နယ် ထူထောင်ရေးနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ click
- မလေးရှားမှာ မြန်မာတွေကို တိုက်ခိုက်လို့ ၃ ဦး သေဆုံး click
- မြန်မာအလုပ်သမား ၁၂ ဦး အလောင်းတွေ ထိုင်းပင်လယ်ပြင်မှာ တွေ့ရှိ click
- မယုံဘူးဆို ကြုံဖူးမှသိတဲ့ မလေးရှားသံအမတ်နှင့် မြန်မာအလုပ်သမားများဘ၀ click
- ဆန်ဈေးတက်လို့ ပို့ကုန်သမားတွေ အခက်ကြုံ click
- ပြည်တွင်းဖြစ် ချည်ထည်လုပ်ငန်း (ရုပ်သံ) click
- မဟာကန်ချင်သူ ပြဇာတ် click
- ဆုနဲ့ ဒဏ် click
- တန်ရာ တန်ရာ click
- ဂန္တ၀င်စာဆိုတော်ကြီးများ - ရှင်မဟာရဋ္ဌသာရ (ဆောင်းပါး) click
- မိုဘီဂျီနိုနဲ့ ဘောလုံးစတား (အသံ) click
- ခေတ်မီတိုးတက်သော “တော်သစ်ကြီးနဲ့ ချက်ကြီးပေါ်လစီ” မြန်မာပြည် (ကာတွန်း) click
- သူစား ကုိုယ်စား (ကာတွန်း) click
- သမရိုးကျ လက်နက်ကုန်သွယ်မှု ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ် ကုလ လက်မှတ်ထိုး click
- တူရကီ ဆန္ဒပြမှု မျက်ရည်ယိုဗုံးသုံး လူစုခွဲ click
- အီရန်အပေါ် အမေရိကန် ဒဏ်ခတ်မှုအသစ် click
- လျှို့ဝှက်သတင်း ပေါက်ကြားမှုနဲ့ အမေရိကန်စစ်သားကို ရုံးစတင် click
- အကျဉ်းကျ ထိုင်ဝမ်သမ္မတဟောင်း သေကြောင်းကြံဖို့ ကြိုးစား click
- Tiananmen ရင်ပြင် လှုပ်ရှားမှု ၂၄ နှစ်ပြည့် (ရုပ်သံ) click
- တရုတ် ကြက်သားစက်ရုံမီး လူ ၁၁၉ ဦး သေဆုံး click
- တရုတ် ကြက်သားစက်ရုံ မီးလောင်မှုကြောင့် အနည်းဆုံး လူ ၁၁၉ ဦး သေဆုံး click
- ထိုင်းနိုင်ငံက ဆန္ဒပြပွဲများ (ရုပ်သံ) click
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:10 PM
4G မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းများကို Digicel က ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက် စဖြန့်မည် သိရပါတယ် ၊ လုပ်ငန်း ရခဲ.ရင် တဲ. ။
.. ရစေချင်ပါတယ် ၊
ဒါပေမယ်. ဖုံးပြောခ လက်ရှိနှုန်း တစ်မိနစ် ၅၀ ကျပ် ကတော.များ လှပါတယ်၊ ၁၅ကျပ် ၊ ၂၀ ကျပ် လောက်ဆို
.. ဖုံး အင်တာနက် သုံးစွဲ ခနဲ. မြန်နှုန်း ဘယ်လောက် ရနိုင်မှာ
ဆိုတာကိုလည်း ကြိုတင် အာမခံ ကြေညာပေးရင်ကောင်း